अब्राहम लिंकनको संघर्षशील जीवन यात्रा - Safal Stories
Home Short Stories अब्राहम लिंकनको संघर्षशील जीवन यात्रा
अब्राहम लिंकनको संघर्षशील जीवन यात्रा
अमेरिकाका सोह्रौं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन १२ फेब्रुवरी,१८०९ मा अमेरिकाको हड्गेंभिल्ले केन्टकीमा जन्मिएका थिए । राजनीति देखी टाढा रहेको एक गरिब परिवारको छोरो उनि लगातार दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेर मान्छे बेच्ने परम्परा हटाई प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न सफल हुनु आफैमा गौरवपूर्ण छ ।
यहाँ अब्राहम लिंकनको जीवनको संघर्षशील यात्रालाई छोटकरीमा प्रस्तुत गरिएको छ :
सन् १८१६ : अब्राहम लिंकनको परिवारलाई उनीहरुकै घरबाट निकालियो र परिवारलाई सहयोग गर्न उनले काम गर्न थाले।
१८१८ : आमाको निधन ।
१८३१ : बिजनेसमा असफल ।
१८३२ : राज्यबाट संसदको लागि प्रयास तर असफल ।
१८३२ : जागिर गुम्यो, कानुन पढ्न कलेज जान चाहन्थे तर पाएनन् ।
१८३३ : बिजनेस सुरु गर्न साथीसंग बाट ऋण लिए तर बिजनेस असफल भएर बैंक लिलामी मा परे । त्यो ऋण तिर्न उनलाई १७ वर्ष लाग्यो ।
१८३४ : राज्यबाट संसदको लागि लडे र जिते।
१८३५ : बिहेको लागि इन्गेजमेन्ट गरे, तर विवाह पनि गर्न नपाउँदै उनकी प्रियसीको निधन भयो ।
१८३६ : प्रियसीको निधन पछि भावनात्मक रुपले कम्जोर बनेका उनी ‘बेड रेस्ट’ मै रहे ।
१८३८ : राज्यको संसदको प्रवक्ता बन्न लडे तर हारे ।
१८४० : एलेक्टर बन्ने प्रयास गरे, तर त्यसमा पनि हारे ।
१८४३ : सांसदको लागि लडे तर हारे ।
१८४६ : फेरी निर्वाचन लडे र जिते । धेरै राम्रो काम गरेर देखाए ।
१८४८ : फेरी निर्वाचन लडे तर हारे ।
१८४९ : ल्याण्ड अफिसरको लागि जागिरको प्रयास गरे तर छनिएनन् ।
१८५४ : अमेरिकाको संसदमा पुग्न लडे तर हारे ।
१८५६ : पार्टीकोको उपाध्यक्षको लागि लडे, तर हारे ।
१८५८ : संसदको लागि लडे तर हारे ।
१८६० : अमेरिकाको राष्ट्रपतिको रुपमा चुनिए र विश्वसामु आफ्नो क्षमतालाई प्रमाणित गरेर देखाए ।
अब्राहम लिंकनको पूरा जीवनी पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Previousनेपाली लेखकका प्रेरक पुस्तकहरु
Nextक्यान्सर पिडित बालकलाई एकैदिनमा १४ हजार ग्रिटिंग कार्ड
प्रेरक प्रसंग : तपाईं कस्तो संगतमा हुनुहुन्छ ?
प्रेरक प्रसंग : शत्रुता र मित्रता
प्रेरक प्रसंग : शुभकामना
प्रेरक प्रसङ्ग : गल्ती
साधारण चित्र भित्र लुकेको गहन संदेश
चलाख बन्न चाहनुहुन्छ ? पढ्नुहोस् लघु कथा : एक प्रश्न
लघु कथा : आमाबुवा र सन्तान
कथा : मयुरको सुन्दरता